Wadzidza ballet kwenguva yakareba kudaro, unoziva here zvinoreva bhasiketi? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Wadzidza ballet kwenguva yakareba kudaro, unoziva here zvinoreva bhasiketi?
Wadzidza ballet kwenguva yakareba kudaro, unoziva here zvinoreva bhasiketi?
"Ballet" yakatanga kuItari uye ikabudirira muFrance. Izwi rekuti ballet rinobva mukuturikirwa kweChirungu kweFrench ballet, zvinoreva "kutamba" kana "kutamba." Ballet pakutanga yaive mhando yekutamba yaiitwa nevanhu vazhinji kuti vazvivaraidze kana zvikwere muEurope. Mukuita kwekuvandudza, yakaumba yakasimba uye yakasarudzika fomu. Chinhu chayo chikuru ndechekuti vatambi vemitambo vanofanirwa kupfeka shangu dzakasarudzika uye kumira pazvigunwe zvavo kutamba.
Seyakazara art art, ballet yakaumbwa mumatare eFrance muzana ramakore rechi 17. Muna 1661, King Louis XIV weFrance akarayira kuvambwa kwechikoro chekutanga chekutamba muParis, ichigadzira tsoka shanu dzakakosha nemaoko gumi nemaviri ebarlet, saka iyo ballet ine seti yakazara yekufamba uye masystem.Aya mashanu tsoka tsoka achiri kushandiswa nhasi.
Hazvina basa mukirasi yekudzidzira kana padanho, vatambi vanopfeka zvakapfekedzwa zvipfeko zvekudzidzira. Chimwe nechimwe chazvo chine chinangwa chaicho.Tight uye tights ndivo vatambi 'ekutanga maitiro ekupfeka. Mu classical ballet, vasikana vanowanzo pfeka matinji matema ane epink tights. Vasikana vemu classical ballet vanofarira kuve nebvudzi ravo hafu mubhanhi kumashure kwemusoro wavo, kuitira kuti mitsara yemutsipa wavo nemusoro zvinyatso kujeka. vakomana nevasikana vasikana vasati vadzidzira zvigunwe zvavo. Vasikana vanopfeka pinki uye vakomana vanopfeka nhema kana chena.
Tight (Leotard / Unitard)
Izvo zvinhu zvinowanzo gadzirwa ne nylon / Lycra uye ine kusimba kukuru.Vakomana 'tights dzinowanzo sandarara uye dzimwe dzinokura kusvika pamabvi, asi hadzina dzakawandisa dhizaini.Maonero evasikana, ivo vanonyanya kushandisa iyo katatu manyorero akafanana kushambira, senge yakaderera-kumashure dhizaini, hollow kumashure maitiro, kondomu bhanhire maitiro, v-mutsipa uye zvichingodaro, kuwedzera kune refu uye mapfupi maoko / akakwirira uye akaderera mutsipa, nezvimwewo, kuitira kuti vasikana vagone kuratidza zvizere Runako kana uchidzidzira.Zvechokwadi, zvisinei nekuti dhizaini dhizaini, iro rekutanga basa rekubatsira kusimbisa mhasuru rinoramba rakafanana.
Pamusoro pezvo, ruvara rwevhudzi remusikana rinewo musiyano, kazhinji vana vanotanga kuita pinki, nekukwira kwedanho, vara zvishoma nezvishoma kuenda kurima shanduko Asi izvi zvinongobatsira mukudzidza, nepo kune dzimwe nzvimbo, senge ballet, mavara kazhinji inyaya yezvaunoda
Tight haingobatsire vatambi ve ballet kuratidzira makumbo avo akakwana, asi nekushanda, vanovabatsirawo kusimbisa mhasuru yavo uye kutarisisa zvigunwe zvavo.Pantyhose inowanzo shandisa nylon pakutanga, asi iyo nylon yakasununguka, inofema, pantyhose ikozvino inowanzobatana nevelvet, yakavandudzwa kukwana kwe tights uye sweat yekumwa mashandiro, mutambi haazoiti nekuda kwekupfeka matinji akakora nekuda kwe sweat yakawandisa mushure mekutamba kwenguva refu anonzwa kushaya simba, panguva imwecheteyo nguva, velvet leggings inogona zvakare kuve neakanaka ekuchengetedza kupisa maitiro, kudzivirira muviri zvakare kutsanya kutonhora uye cramps.
Yakareba siketi ihwo hunhu hwekutamba siketi yerudo ballet, iyo inogona kuenzaniswa neyakaomeswa dhanzi mbatya mune zvakajairika. Mumiririri wayo anomiririra anosanganisira Iyo Fairy, nezvimwe. Iyo yekutamba siketi inoumbwa nematanho akati wandei, ayo anonyanya kuchena. Kana uchitamba, jira rejira rinokwira kumusoro uye pasi, iro rinoratidzika kunge rakangwara uye rakanaka, richipa vanhu manzwiro ekuona ekuona.
Kutendeuka neziso ndeimwe yeakanyanya kunaka echinyakare ballet yekutamba siketi, inoratidzirwa nesiketi pfupi kwazvo, chiuno chakatambanudzwa, kufambisa vateereri kukoshesa kufamba kwavo kwemakumbo nehungwaru nemakumbo avo akanaka, mu "swan lake" mutambo, Tutu aive ndoda kusvika pakakwirira, uyezve vanhu kana zvasvika kune ballet, kazhinji zvicharatidza vatambi mukutendeuka uye mufananidzo weshangu dzechigunwe unogona kuwanikwa mukubudirira kwayo.
Tutu inogadzirwa neshinda yakakosha, yakapatsanurwa kuita naTutu uye mashandiro naTutu, mutsauko mukuru pakati pezviviri uwandu hweshinda, iyo yekutanga inonyanyo shandiswa mukuita, nekudaro kazhinji shinda yakawanda kwazvo, nepo yekupedzisira ichi kazhinji kuti uratidze vakadzi vakashongedzwa kana vakashongedzwa, vanowanzo shandisa zvakapetwa nhanhatu, zvioneke kunge zvakapetwa zvakapetwa, uye kwete seyakaomarara sekudzidzira nekusvetuka. Uyezve, mashandiro ekushandura jekiseni rinowirirana rakabatana zvakananga, uye kutendeuka tsika kazhinji kacho siketi yekutamba ndega, isina tie-mujasi, kazhinji kacho inongoenderana nemayunifomu, sekudzidzira kudzoka nemabhurugwa kana isina bhurugwa repasi (ratidza mukutendeuka rakabatana pazasi pebhurugwa), nekuti mayunifomu, uye nekudaro hapana musiyano wakakosha pakati pezviviri, ingori sarudzo yemunhu.
Nongedza shangu / shangu yeBallet
Uyu ndiwo musiyano unoshamisa pakati pe ballet nedzimwe mhando dzekutamba, ndokuti, mutambi anogona kutamba akatwasuka pazvigunwe zvake achibatsirwa neshangu dzinonongedzwa. Kusvikira paine fungidziro yekuti mutambi uyu chidimbu chehuni padhuze neshangu shangu yakamira kutamba , asi zviripo, chigunwe shangu isina chero huni, shangu dzechigunwe dzinogona kubatsira zvichibva patip, nekuti pamusoro peshangu yakagadzirwa nematanda anonamira matanda nematanda emachira kumusoro uye kutamba uye fomu, uye pane yega yerabha. shangu bhodhi yekutsigira tsoka kuti vakwanise kumira tiptoe.
Poindi shangu ine centi yesatin nemachira kumeso, iko kushanda isatin kazhinji, jira kumeso kunoshandiswa pakujaira zvakajairika, pane musiyano zvakasununguka pakati pemutengo wavo.
Heano maviri akanaka esiti satin anonongedza shangu. Mberi kweshangu ndiyo Platform, pane vatambi vanomisa zvigunwe.Chidimbu pamusoro pendege iri Bhokisi, iro rinofukidza zvigunwe zvigunwe. Pamusoro pechigunwe chakanamatidzwa netsoka nekusimbisa kwekusunga pamusoro. Jozi reshangu dzakagadzirwa zvakanaka uye dzakashongedzwa zvakanaka dzinofanira kusungirirwa patsoka, kungofanana neganda repiri retsoka yemutambi.Kuseri kweshangu kune iyo Sole, kazhinji iine brand Logo. Kune mamwe mafekitori ane insole, senge Capzio neSansha, idzo dzakadhindwa zvese mukati nekunze.Shank, Shank inotsigira shangu yakazara, ine Shank. Softer Shank iri nyore kutambanudza zvigunwe uye kuratidza yakanakisa instep, asi chakashata ndechekuti inoreruka zviri nyore, haigare kwenguva refu, uye vanotanga vasina simba reArch vanokombamira kupora, kusiyana neakaomarara Shank. shangu dzetsoka hadzidiwe, asi dzimwe nguva shangu dzinogona kunge dzisiri chitsitsinho, uko rabha inogona kunge iri mhinduro yakanaka.
Iyo LACES ye ballet shangu zvakare yakanaka seye ballet. Iwo maribhoni maviri akayambuka uye akasungwa kumakumbo. Iyo LACES inova zvakare basa rehunyanzvi kana tsoka dzatambanudzwa.
Vanhu vanowanzo taura kuti vasikana vekutamba ballet vanowanzove nehurema hwetsoka, kunyange kusvetuka tiptoe ine ropa uye pantyhose dzakaomarara neshangu, tsoka dzakaparadzana, urwu rudzi rwemaonero zvinhu zvakawedzeredzwa, kunyangwe vatambi vehunyanzvi vane hurema hwechigunwe husingadziviriki, asi "reropa" taura muzuva ranhasi rakatove chinhu chekare, nekuti neshangu dzakanaka neshangu dzinogona kunetesa tsoka, akanongedzera kukuvara kwetsoka, sekureba sekuteerera kuchengetedzwa kwetsoka, inogona kudzivirira kukuvara kusingakoshi, kubatsira kugadzirisa hunhu pane kuuraya tiptoe.
Yapfuura:Nei tutus iri kupfupika? TUTU zvinoreva 'gadheni revakadzi rakavanzika'?
Tevere:Nei iwe uchipfeka sutu "yechinyakare" kutamba ballet?